DegDeg: Bartamaha Magaalada Boosaaso oo goordhaweyd lagu dilay. – Kismaayo24 News Agency
DegDeg: Bartamaha Magaalada Boosaaso oo goordhaweyd lagu dilay.
by admin 9th January 2020 0240
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in gudaha magaaladaasi lagu diley sarkaal ka tirsanaa ciidamada Taraafikada ee Puntland.
Sarkaalka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cumar Iley, waxaana dilkiisa ka dambeeyey kooxo ku hubaysnaa baastoolado ay ku toogtay isgoyska Gaaco oo ah meel wax yar u jirta xarunta dowladda hoose ee Boosaaso.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in ragii ka dambeeyey dilkiisa ay goobta ka baxsadeen isla markaasna sarkaalka maydkiisa goobtaasi ay ka qaadeen askar kale oo soo gaadhay meesha uu dilka ka dhacay.
Wararku waxa ay intaasi kusii darayaan in ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Puntland ay hawlgal kawadaan xaafadaha magaalada Boosaaso qaybtooda si ay gacanta ugu soo dhigaan cidii ka dambaysay dilka sarkaal Iley kuwaas hakad galiyey isku socodka dadka iyo ganacsiga.
Amaanka magaalada Boosaaso ee ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid aan wanaagsanayn, waxaana ka dhacay magaalada Boosaaso dilal dhowr ah iyo weerar, kuwaas oo ay sheegteen kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish.
Dhageyso+Sawirro:- Kabiirka Kooxda Qeylo-dhaan oo Khudbad Xasaasi ah ka Jeediyay Xarunta Baarlamaanka Soomaaliya
Wasaarada Arimaha Gudaha oo xaqiijisey in ay socdaan wadda hadaladda Maamul u sameynta Gobaladda Hiiran iyo Shabeelaha Dhaxe.